Reinvest mugove | Ehupfumi Zvemari
Marozari pamusika wemasheya anounza avhareji yemubhadharo wepakati pe5% uye mune chero zvazvingava zvinoreva kuita mari yakatarwa mukati meiyo musiyano. Kuburikidza ne yakatarwa uye yakavimbiswa kubhadhara Gore rega rega, chero chii chinoitika mumisika yemari. Nechibereko chemari chinodarika zvakanyanya izvo zvinogadzirwa nemabhangi makuru zvigadzirwa (yakatarwa-nguva dhipoziti, makambani ekuvimbisa manotsi kana maakaundi ane mari zhinji). Mune ese iwo, muripo wevatengi hauwanzo pfuura 1% mazinga uye ndicho chimwe chezvikonzero zvekusarudzira zvikamu zvakagoverwa nemamwe emakambani akanyorwa.
Chero zvazvingaitika, pane imwe nzira yekutsvagisa mubairo mumisika yemari uye inoitika kuburikidza nekudzoreredzwa kwemutero uyu kune wekugovana. Ichokwadi kuti haazi makambani ese anoita kuti chiito ichi chigoneke, asi iri sarudzo yakavhurika kune vashoma nevapakati varimari vanoshuvira kusimbisa zvinzvimbo zvavo pamusika wemasheya. Saka kuti nenzira iyi, kuvepo kwayo mumakambani akanyorwa kwakazara uye kune simba kupfuura ipapo. Nenzira, ndiyo nzira ye ramba uchisarudza bhegi seyakanakisa nzira yekuita iyo mari inobatsira kubva ikozvino.
Chii chinozadzikiswa kuburikidza neiyi yakasarudzika nzira yekudyara? Zvakanaka, pamusoro pezvose kusimbisa zvinzvimbo zvakatotorwa. Nekuti marongero ekudzoreredza zvirongwa anotendera muzvinabhizimusi kuti angotenga zvikamu zvitsva. Mhedzisiro yaro yekukurumidza ndeyekuti muyero we zvikamu inokura zvishoma nezvishoma. Iine mukana wechokwadi wekuti zvimwe zvakawanda mari yepamusoro inowanikwa nekuti isu tine nhamba yakakura kwazvo yemasheya iwe semhedzisiro yeichi chiito pamadigidhi. Hazvishamisi kuti icho chinhu icho nhamba yakanaka yevashandi vanga vachiita mumakore achangopfuura.
1 Mhedzisiro inoenda mukudyara
2 Iyo inogona kuve basa rinobatsira zvakanyanya
3 Kugamuchirwa kwekudzoreredza
4 Inofanira kugovaniswa here?
5 Kunaka kwekuhaya kwako
6 Kukanganisa kwesarudzo iyi
Mhedzisiro inoenda mukudyara
Ehezve, ikozve kudzoreredzwa kwezvikamu kunokutendera iwe kuti uvake yakasimba kwazvo portfolio yekudyara munguva refu. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti uri kuunganidza masheya gore rega rega uye zvinoenderana nemubhadharo wemubhadharo wakakosha uyu kumugovana. Iri izano rakasarudzika iro rakanangana nehupfumi hwemari kunyanya hasha kuti anosarudza pamusoro pezvose kuti arambe akavharirwa mune zvaari kudyara kwete pane kubhadhara nguva yekufarira gore rega. Mune mamwe mazwi, iwe hauna kukurumidza kuita kuti kuvhiya kubatsire sezvo chinangwa chako chikuru chiri cheyakawanda-gore mashandiro. Ehezve, hazvi svike zvese zvinotarisirwa nevaponesi.
Kune rimwe divi, kana uchisarudza danho iri, izvo zvauri kunyatsoda kuisa mari pazvinhu uye hazvina basa kuti zvikamu zvakaunganidzwa panguva yekugovera. Vanotsinhaniswa nezviito yekambani iyo mushandisi akavhura nzvimbo dzavo. Kubva pane ino maonero, iri yakasarudzika sisitimu yekuvandudza chirevo chemari mukati nepakati nepakati. Nesimba rakadzikama mukukosha, zvinova ndizvo zvinozvisiyanisa kubva kune mamwe marudzi emaitiro. Mune mamwe mazwi, iwe unonyatsotora zvikamu, asi kwete nemari. Kana zvisiri, pane kudaro, unovaisa mumabasa.
Iyo inogona kuve basa rinobatsira zvakanyanya
Chero zvazvingaitika, iwe unofanirwa kuona uku ndiko kuvhiya kunogona kubatsira zvakanyanya kana zviito mushure memakore vanoona zvakare. Iyi ndiyo kiyi yekufunga kuti kana zvichikurudzirwa kuenda kune ino kufamba mumisika yemari. Nekuti kana pakupedzisira zvaive nenzira iyi, hapana mubvunzo kuti muzvinashawo anokunda mukufamba kwavo mumusika wemasheya. Zvinogona kutowedzera zvakapetwa kana katatu budiro yaungadai wakawana kuburikidza nekubhadharwa kwezvikwereti. Mupfungwa iyi, zvinodikanwa kujekesa zvakanyanya nezve zvinangwa zvinofanirwa kutevedzwa nekuti kuvhiya uku kunogona zvakare kuve nemhedzisiro yakaipa pachirevo chemari yevashandisi.
Usati wasarudza kudzorerazve muzvikwereti, unofanirwa kufunga zvauri kutsvaga mumisika yemari. Kunyanya zvine chekuita ne mazwi ekugara nekuti kana mashandiro ako mumusika wemasheya akanangidzirwa kunguva pfupi hazviite chero pfungwa kuti iwe uite chiitiko ichi. Zvakare, pamwe nezvose zvine chokwadi chekuti pakupedzisira unozopedzisira warasikirwa nemari uye unodemba kuti hauna kuwana mubhadharo wezvambotaurwa. Naizvozvo, iko kuvhiya kunoda kuratidzwa pane izvo zvauri kutsvaga mune inogara iri yakaoma nyika yemusika wemusika.
Kana pakupedzisira iwe ukazendamira kune ino nzira yekudyara, iwe haungashaye zvikonzero kuita. Kwete pasina, uchafanirwa kuongorora zvakadzama kuti ndeapi mabhenefiti aunounzwa nekuvhiya uku. Kunyangwe kuitira kuti iwe utore chiyero nenzira yakaenzana, haufanire kukanganwa nezvekukuvadzwa kusingazokonzerwe kwauri nekusaunganidza zvikwereti zvakananga. Sezvo isu takuudza iwe muchinyorwa chino, ichi chisarudzo chinoenderana zvakanyanya neprofile iwe yaunopa semudiki uye wepakati investor. Zvakanaka, zviri pakupera kwezuva izvo zvazviri.
Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti iyo yekusaver ine hukasha haina kufanana neyaanozvidzivirira kana anonyanya kuchengetedza maitiro. Kusvika pamwero wavanoda a kurapwa kwakasiyana, sezvo iwe uchifanoona kuburikidza nekudzidza kwako mumisika yemari. Ehezve, ndechimwe chezvinhu zvaunofanira kunyatsoongorora panguva chaiyo mamiriro ezvinhu anomuka. Pamusoro pedzimwe nzira dzehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakakosha maonero. Usakanganwe kana iwe usiri kuda kuita chikanganiso chakakomba kana nguva yasvika yekugovaniswa kwezvikamu.
Inofanira kugovaniswa here?
Iyi mamiriro anozove akanaka kwazvo kana mamwe emamiriro ezvinhu atinozotsanangura pazasi achiitika. Kwete pasina, iwe unozowana yako investa kuti ive yakanyanya kusimba kupfuura kusvika zvino. Saka kuti iwe usambove nekusahadzika chero chinhu, hapana zvirinani pane kukuratidza izvi zviitiko izvo sarudzo yako inoenderana nezvichengetedzo zvinogovera zvikamu pakati pevachagovana navo. Iwe unoda here kusvika kune ino yakakodzera poindi? Zvakanaka, teerera nekuti inogona kuve chishandiso chinobatsira kwazvo mukudyara kwako mumusika wemasheya.
Kunaka kwekuhaya kwako
Kunyangwe chiri chigadzirwa chine mwero, hachisi zvese zvakanakira uye kuhaya kwacho kunoenderana nerudzi rwevatengi kwarunotumirwa. Pakati pezvakanakira izvo mushandisi wemusika wekutengesa anogona kuwana zvinotevera:
Inopa mubhadharo mukuru izvo zvinoenda zvachose kune kudyara kwakagadziriswa panguva iyoyo.
Inokutendera iwe kubvisa kubhadhara kwe kugadzirisa uye kutarisira mari uye kunyangwe emakomisheni ese. Kune rimwe divi, hapana mhando yemitero ichadzikiswa, sezvazviri nekubhadharwa kwakananga kwezvikamu.
Iyo iri nyore nzira yekuti iwe unofanirwa kudzoreredza mari inogadzirwa nenzira iyi yekudzorera. Pasina kukosha kwekuenda ku mari yemari kuseta mutengo wekuita basa.
Kukanganisa kwesarudzo iyi
Pane kudaro, mashandisiro ayo anosanganisira akateedzana ekukuvadzwa ayo asingakwanise kugadziriswa nekutendeukira kune ino system kupinda nenzvimbo nyowani mune yakasarudzwa kukosha. Nekuti mukuita, kukura kwayo kunosanganisira zvakateedzana zvezvikanganiso zvaunofanira zvakare kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi Uye pakati pezvi zvinotevera kumira kuti tinokufumura mune ino chinyorwa.
Usakanganisa kune ese equities iyo inopa migove kune avo vagovana navo. Kana zvisiri, pane kudaro, vashoma chete ndivo vanotongwa neaya ma parameter ekudyara. Kusvika padanho rekuti inogona kuita kuti yako yemberi sarudzo ive yakaoma.
Chero zvazvingaitika, iri chigadzirwa chinodzivirira kune varimari vanosarudza kudyara zvakanangana mumusika wemasheya kana kushandisa dzimwe nzira dzinopihwa nemari.
Iri sarudzo rakakosha rinotarisirwa kune vagovana vane zvikamu zvakaiswa mubhangi rimwechete uye pamutengo mumwechete wemusika.
Aya maitiro akakosheswa mune inonzi Ibex Top Dividendo, inova indekisi yemusika weSpanish wemusika unounganidza makambani makumi maviri neshanu nezvibereko zvakakurisa pamabhadharo mumusika weSpain uye ane chinangwa chekutora hunhu hwekambani vanopa rudzi urwu rwekutsiva.
Nenzira iyi, kudyara muzvikamu kunotenderwa kuenda kukura otomatiki uye kufambira mberi uye kusvika pamuganhu waunozviseta iwe zvichienderana nezvinodiwa nemari yako. Muchiitiko chimwe nechimwe, chichava chakasiyana zvakanyanya uye nekudaro kuisirwa kwayo kunogadziriswa kana kwete
Zvikwereti zvakagadzirwa yezvikamu uye kumiswa kwezvido havangapiwi mbiri kota yega yega paaccount, semuma kesi aya.
Aya maitiro ane mukana pane zvimwe zvigadzirwa zvakagadzirwa mune izvo pano chete kungogumira pane zviito emakambani akanyorwa pachawo. Kazhinji zvinoenderana nezvirema zvinorema zvehombodo, inozivikanwa se machipisi ebhuruu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Reinvest zvikamu
Ini ndauya kuzokuudza nezvekambani Sin Impuestos. Iyo yakanakisa kambani inopa masevhisi masevhisi, ivo vakanaka kwazvo, vakandishandira zvakanyanya. Iwo masevhisi anotibvumidza isu kugadzira, kuvandudza mabhizinesi epamhepo, kuchengetedza zvinhu zvedu nemasevhisi, pakati pevamwe ... Iwo makuru.
Miguel Reza akadaro
Ndinoda kuti iwe ubudise mienzaniso yemakambani eUS uye kuti mari yacho yaive dhora nekuti ndinogara kuHouston Texas USA.
Pindura Miguel Reza
Chii chiri mubhadharo yekubhadhara?